Barcelona Oo Guul Ka Heshay Espanyol Kulanka Catalan Derby, Lionel Messi Oo Laba Gool Dhaliyay & Blaugrana Oo Hoggaanka La Liga 13 Dhibcood Ku Qabatay. - Gool24.Net
Barcelona Oo Guul Ka Heshay Espanyol Kulanka Catalan Derby, Lionel Messi Oo Laba Gool Dhaliyay & Blaugrana Oo Hoggaanka La Liga 13 Dhibcood Ku Qabatay.
March 30, 2019 Apdihakem Omer Adem
Kooxda Barcelona ayaa guul weyn oo muhiim u ah ka gaadhay kooxda Espanyol oo ay magaalo xifaaltamaan waxaana guushaas fure u ahaa kabtanka kooxda ee Lionel Messi.
Messi ayaa kulankan gaadhay laba guulood, Mida koowaad ayaa ah guusha kooxda oo uu hoggaanka horyaalka ugu dhiibay 13 dhibcood halka guusha labaad ay tahay inuu sii dheeraystay hoggaanka gool dhalinta La Liga iyo qaarada Yuruba.
Espanyol: Lopez, Naldo, Lopez, Hermoso, Pedrosa, Rosales, Roca, Sanchez, Melendo, Granero, Iglesias
Barcelona ayaa ugu horreynba bilawday inay kubadda haysato balse fursadii ugu horreysay ee kulanka ayay heshay Espanyol waxaana kubad madax ah meel ka baxsan xerada ganaaxa goolka ku beegsaday Melendo balse goolhaye Ter Stegen ayaa qabsaday kubaddaas.
Intaa kaddib Ivan Rakitic ayaa markiisa darbeeyay kubad xoogan isaga oo jooga banaanka xerada ganaaxa laakiin kubadda uu tuuray xiddigani ayaa gees ka martay goolka Espanyol.
Markale Barca ayaa halkeeda kasii waday abuurista fursadaha halista badan, Suarez ayaa baas ka helay Alba weeraryahankana ayaana kubadda ku darbeeyay goolka balse ma samayn wax bar-tilmaameed ah oo toos ah.
Markale Kabtanka Barcelona ee Messi ayaa isku day ku sameeyay goolka balse isaga qudhiisa ayaan ku guulaysan inuu is mari waaga kulanka jabiyo qaybta hore ee ciyaarta ayaana kusoo dhammaatay 0-0 goolal la’aan ah.
Qaybta dambe ee kulanka ayay Espanyol lasoo laabatay dar dar intii hore ka badan, Melendo oo halis badan abuurayay ayaana markale kubadda si toos ah ugu bar-tilmaameedsaday goolka Blaugrana laakiin ku fashilmay inuu shabaqa gaadho.
GOOAL: Kulanka ayay Barca ugu dambayn hoggaankiisa la wareegtay, Messi ayaana markale muujiyay sababta uu u yahay hoggaanka kooxda waxaana uu si habsami leh goolka goolhaye Deigo Lopez u dhex dhigay laad xor ah oo uu soo tuuray.
Barca ayaa kaddib goolkeeda furitaanka kulanka u bedeshay qaab kubad haysasho waxaana ay dhiibeen baasas badan iyaga oo natiijada difaacanaya.
GOOAL: Markale Messi ayaa soo af-meeray rajada kulanka ee kooxdan ay xifaaltamaan, Malcom ayaa kasoo xarooday garabka midig waxaana uu baas xerada ganaaxa u dhex dhigay Messi kaas oo si toos ah u darbeeyay hoos mariyayna goolhayaha.
Ugu dambayn, Ciyaarta ayaa kusoo dhammaatay guul 2-0 ah oo ay gaadhay Barcelona waxaana guushaas masuuliyadeeda qaaday Lionel Messi.